June 2020 - Page 3 of 3 - Puntland Mirror Believable Media Website
June 10, 2020 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Dowladda Puntland ayaa soo dhaweysay baaqa guddoomiyaha aqalka sare ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ee ah in la qabto shir wadatashi oo u dhaxeeya dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe. War-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada […]
June 8, 2020 Puntland Mirror 0
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Ciidamada Puntland iyo Galmudug ayaa gudaha magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ka bilaabay howlgal lagu xaqiijinayo amniga magaalada. Howlgalka wadajirka ah ayaa bilaabmay habeenimadii xalay, sida ilo-wareedyo haayadaha ammaanka katirsan ay u sheegeen […]
June 6, 2020 Puntland Mirror 0
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Ciidamada Difaaca Puntland ee PSF ayaa sheegay in ay dileen madaxii maleeshiyada Al-Shabaab u qaabilsanaa qaraxyada gobolka Mudug. Howgal ka dhacay magaalada Gaalkacyo oo ay ka qeybgaleen qeybta 21-aad ee ciidanka Danab ee […]
June 4, 2020 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Duulimaadyada maxaliga ah ee Soomaaliya ayaa dib u bilaabman doona kadib markii loo joojiyay ka hortaga cudurka coronavirus. Wasiirka Gadiidka iyo Duulista Hawada ee Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomaar ayaa shalay […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland ayaa dadweynaha gaar ahaan dhalinyarada ka codsaday in ay ka qeybgalaan hanaanka dimuqraadiyaynta Puntland. Isaga oo la hadlayay bulshada fiidnimadii Isniinta, Siciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in ay ka go’antahay hirgalinta […]